Elvira Busts Miverina ao amin'ny Primetime Miaraka amin'ny New Shudder Special
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Elvira Busts Miverina ao amin'ny Primetime Miaraka amin'ny New Shudder Special
Niverina teo ambony sezalà ny Tompovavin'ny Maizina!
by Timothy Rawles Septambra 16, 2021
by Timothy Rawles Septambra 16, 2021 1,004 hevitra
Ny mpampiantrano fantsom-booby ankafizinay dia miverina eo amin'ny farafara ary mampiditra sary mihetsika efatra ho an'ny sarimihetsika B mangovitra mpamandrika. Ny sabotsy 25 septambra 2021, Elvira, Tompovavin'ny maizina dia hamoaka sakana mampatahotra ho toy ny ampahan'ny taonan'ny Shudder “Andro 61 amin'ny Halloween.”
Ity “mampatahotra be, manokana manokana ”mampivondrona an'i Elvira miaraka amin'ny sezalà soniaviny sy ny fanehoan-kevitr'olon-droa momba ny faha 40 taonany amin'ny fahitalavitra.
“Sarotra foana ny mihodina amin'ny faha-40 taonany, saingy inona no fomba tsara kokoa hanamarihana ny fotoana toy izay hijoro mandritra ny iray alina miaraka amin'i Shudder, ilay mpandoka troka indrindra? Io no ho lasa Hallow-anniversa-ween bash farany, ary tsy tianao halahelo izany, ”hoy i Elvira.
Craig Engler, GM an'ny mangovitra, hoy i Shudder's Halloween hitsaboana ireo mpankafy mampihoron-koditra sy mpankafy ilay vehivavy mampiantrano vehivavy mahafinaritra.
“Elvira dia angano iray izay nanazava ny efijery sy mpankafy mahafinaritra antsika nandritra ny 40 taona, ary voninahitra ho antsika ny mankalaza ny zava-bita tsara indrindra 'Queen of Halloween' miaraka amin'ny miavaka manokana 'tena manokana', ny fitsaboana sahaza ny mpikambana Shudder ity. Vanim-potoana Halloween. ”
Zahao ny promo etsy ambany ary vakio izay ao amin'ny laharan'i Elvira. Iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika ny kintan'ny mpanjaka maizina.
Elvira, Tompovavin'ny maizina (1988)
Rehefa tonga tao amin'ny tanàna kely iray izay nandovany tranobe manjavozavo, mpampiantrano horohoro malaza iray dia miady amin'ny dadatoany ratsy fanahy, ary ireo olona maniry azy hodorana amin'ny tsato-kazo.
Trano eny an-tampon'ny havoana (1959)
Ny mpampihorohoro feno horohoron-tany nataon'i William Castle dia trano fialamboly tonga saina. I Vincent Price dia mpilalao milionera eccentric suave manambady mpivady mpihady volamena kanto sy feno fitsiriritana. Miara-mikarakara fety ao amin'ny trano manenjika ratsy izy ireo. Vahiny dimy no nasaina handany ny alina ary hahazo $ 10,000 tsirairay avy – raha tsy tafavoaka velona mandra-maraina. Mihidy ny varavarana amin'ny misasakalina. Hataonao velona ve?
Ny tanànan'ny maty (1960)
Amin'ity kilasika atmosfera ity, profesora (sary mampihoron-koditra Christopher Lee) dia mandefa mpianatra any Whitewood, Massachusetts, ilay toerana nisy mpamosavy tamin'ny taonjato faha-17. Rehefa tonga any, dia mianatra ny tsiambaratelon'i satana miaina eto.
Mesias ny ratsy (1973)
Tovovavy iray no mitady ny rainy artista tsy hita. Ny diany dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna amoron-dranomasina Kalifornia hafahafa notendren'ny antokom-pivavahana tsy maty maty. William Huyck sy Gloria Katz, horohoro mahaleo tena tsy mampihetsi-po dia vatosoa tsy maintsy jerena.
40 an'i Elvirath Tsingerintaona, Mampatahotra be, Département spécial spécial on mangovitra Asabotsy, Septambra 25, 2021 amin'ny 8 ora alina ET any Etazonia sy Kanada amin'ny alàlan'ny fahana fahitalavitra Shudder ao anatin'ny fampiharana Shudder ary havoaka ihany koa amin'ny fangatahana amin'ireo sehatra Shudder rehetra (Etazonia, Kanada, UK, Irlanda, Aostralia ary New Zealand) ary AMC + manomboka ny alatsinainy 27 septambra.